कुनै पनि उमेर मा जवान र सुन्दर छाला - एक मिथक आज, तर वास्तविकता छैन। सबैभन्दा हालसालै, झुर्रियाँ र डबल चिउँडो मात्र परिचालन विधि द्वारा हटाउन सकिँदैन। प्लास्टिक अनुहार र शरीर विश्वव्यापी महिला बीच धेरै लोकप्रिय भएको छ। चिकित्सा को विकास कायाकल्प अन्य प्रभावकारी तरिकाहरू खोल्न अनुमति दिएको छ। र प्लास्टिक सर्जरी सधैं प्रभावकारी खतरनाक र विधि बजार supplant गर्न थाले छ हार्डवेयर cosmetology। आज विशेष उपकरण को मद्दतले कायाकल्प को क्षेत्र मा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्न विभिन्न प्रविधिहरू छन्। तिनीहरूलाई को - Fraxel। "यो के हो?" - एउटा प्रश्न धेरै महिला अझै झुर्रियाँ छुटकारा रही एक आधुनिक विधि परिचित छन् छैन सोधे। का यसमा तैनाथ जवाफ प्रयास गरौं। र पहिले नै सेवा परीक्षण गरेको छ कि सौन्दर्य सैलून को ग्राहकहरु को प्रतिक्रियाहरू सुन्न।
Fraxel के हो
एक कायाकल्प र छाला समस्या को उन्मूलन को सबै भन्दा आधुनिक तरिका को। त्यसैले यसलाई के Fraxel को प्रश्नको जवाफ गर्न सम्भव छ। हामी यो प्रविधि को सार बुझ्न हुनेछ।
हरेक दिन, हाम्रो छाला मरिरहेका, पुरानो को स्थान मा कब्जा नयाँ कक्षहरू हजारौं उत्पादन गर्छ। हामीले नियमित रूपमा यसको माथिल्लो तह Scrubs र peels सफाई गरेर यो प्रक्रिया catalyze गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर यी धन मृत कक्षहरू मात्र माथिल्लो तहहरू हटाउने, खोक्रो असर गर्छ। गहिरो सम्झना र विशिष्ट कार्य बनाउन सक्छन् जस्तै लेजर रूपमा मात्र आधुनिक उपकरणहरू। यो साधन भन्दा सामान्यतः हार्डवेयर cosmetology मा प्रयोग भएको छ। कसरी लेजर गर्छ? उपकरण द्वारा उत्सर्जित हुँदा छाला उजागर गर्ने छालहरू,2मिमी को एक दूरी मा गहिरो भित्र पस्नु। तिनीहरूले छाला ऊतक पुरानो कक्षहरू जलाएर छन्। यो एक परिणाम आत्म-नवीकरण र छाला samoomolozheniya को एक सक्रिय प्रक्रिया सुरु रूपमा। पुरानो को स्थान मा कब्जा नयाँ कक्षहरू को उत्पादन हजारौं। यो elastin छाला fibroblasts र कोलैजेन को उत्पादन को बढावा। यो विधि तपाईं मात्र होइन छाला झुर्रियाँ rejuvenate गर्न, हटाउन अनुमति दिन्छ, तर पनि यस्तो राता, dilated रक्त नली, कलेजो स्थलहरू, र थप केही छाला दोष, हटाउन। 10 भन्दा बढी वर्ष पहिले - यो एक लामो समय को लागि यो प्रविधि आविष्कार कि बाहिर जान्छ। पहिलो पटक लागि कायाकल्प विधि संयुक्त राज्य अमेरिका मा परीक्षण गरिएको थियो। हाल उहाँले संसारभरि 70 भन्दा बढी देशहरूमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ। जहाँ तपाईं बाहिर सेवा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग हरेक प्रमुख शहर जो विशेषज्ञहरु नयाँ विधि गोद छन् आधुनिक चिकित्सा, एक क्लिनिक युवा र बनाउनसमेत देखा छ।
उपकरणहरू को किसिम
लेजर बीम छाला विभिन्न गहिराइमा गर्न भित्र पस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण को क्षमता मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले उपकरणहरू को प्रकार निम्न:
Fraxel पुन: स्टोर: यो इर्बियम लेजर 1550 नैनोमीटर एक तरङलम्बाइ संग। यो संग छाला तहहरूमा प्रवेश 0.4 1.4 मिमी को एक गहिराई गर्न बाहिर छ। यसको प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ: photoaging, उमेर pigmentation, मुखासे र पोस्ट-मुखासे को संकेत, सूर्य छाला गर्न बल्छ। यो मानक र यस्तो कार्य भन्दा साधारण उपकरण हो। यो निश्चित लागि, छ, कुनै पनि ठूलो शहर मा आधुनिक चिकित्सा हरेक क्लिनिक।
Fraxel पुन: तरंग दैर्ध्य 1550 नैनोमीटर मा इर्बियम र लम्बाइ थुलियम 1927 नैनोमीटर: स्टोर DUAL दुई पराबैंगनीकिरण को प्रयोग पनि समावेश छ। हामी यन्त्र तुलना यदि उपकरण Fraxel पुन संग: स्टोर, यो अलग अलग तरंग दैर्ध्य बढी उन्नत यसलाई प्रयोग गरिन्छ हो भन्नुभयो गर्न सकिन्छ। यो झुर्रियाँ सहित गहिरो हटाउन scars, पोस्ट-मुखासे उपचार हटाइ लागि प्रयोग गरिन्छ, उमेर स्थलहरू को हटाउनु।
Fraxel पुन: ठीक: यो 1440 नैनोमीटर एक तरङलम्बाइ संग इर्बियम लेजर। यो भन्दा "कोमल" उपकरण लेजर यो कार्य को उपचार हो। यो अनुहार र शरीर उपचार को "संवेदनशील" को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो संवेदनशील छाला र superfine मानिसहरूलाई प्रयोगको लागि संकेत छ। तिनीहरूले पनि परेलिहरु र स्तन ऊतक प्रक्रिया गर्न सकिन्छ। प्रक्रिया पछि पुनःस्थापना छोटो अवधि को सामान्यतया छ।
Fraxel पुन: जोडी: यो माथि प्रस्तुत सबै उपकरणको सबैभन्दा आक्रामक छ। यसको रेज गर्ने epidermis को गहिरो तहहरूमा भित्र पस्नु। अनुहार र घाँटी र scars मा झुर्रियाँ हटाउन यो मानाङ्कन। विधि अतिरिक्त बोसो सकारात्मक प्रभाव छ, यो छाला को अदृश्य pores बनाउन मद्दत गर्छ।
सत्र कस्तो छ
कायाकल्प उपचार धेरै चरणमा गरिन्छ:
मेकअप र माटो बाट एक विशेष संरचना र कपास स्पन्जले संग छाला शुद्ध पार्नुहुन्छ।
आवेदन विशिष्ट analgesic lidocaine सत्र सुरु गर्नु अघि 40 मिनेट आधारित लेप।
लेजर टिप को स्लाइड लागि nanodiamonds उपयोग गरदै र छाला स्नेहन विशेष स्नेहक हटाउन।
उपकरण प्रयोग गरेर विजार्ड। यस उपकरण प्रयोग गरेर "Fraxel" विशेषज्ञ पहिलो निधारमा, गाला र चिउँडो प्रक्रियाहरु। यो उद्देश्य व्यापक चुच्चो लेजर लागि।
उपकरण प्रसंस्करण periorbital क्षेत्र र परेलिहरु। यहाँ कलाकार को साघुँरो मा लेजर चुच्चो परिवर्तन।
सञ्चय कोष को सफाई।
प्रत्येक दिशा मा4पटक: नियम, विशेषज्ञ छाला को ठाडो र तेर्सो चलखेललाई बनाउँछ। प्रक्रिया सामान्यतया यदि प्रदर्शन अनुहार उपचार 20 मिनेट र अर्को 10 यदि प्रदर्शन हातमा को कायाकल्प मिनेट लाग्छ। पटक-पटक उपचार पहिलो पछि कुनै पहिले पाँच हप्ता भन्दा दिइएको गर्न सकिन्छ। 4-6 सेट को एक औसत एक पूर्ण पाठ्यक्रम। अब एक अघि र कायाकल्प आंशिक लेजर पछि Fraxel रूपमा यस्तो प्रक्रिया को परिणाम आकलन गर्न सक्छन्।
प्रक्रिया को लाभ
र अब Fraxel रूपमा कायाकल्प पाठ्यक्रम यो विधि पारित गरेर के हासिल गर्न सकिन्छ कुरा गरौं। यसलाई के हामी एक सानो वर्तमान छ। यो प्रक्रिया ठीक रूपमा अनुहार झुर्रियाँ र गहिरो उमेर, "काग खुट्टा" nasolabial Folds, घाँटी मा खातिका, निधारमा र यति मा सहित हटाउन सक्छन्। यो सिर्फ एक को उपस्थिति देखि घट जो, scars, scars र छाला बल्न भएका ती मानिसहरूको लागि मुक्ति - यो यो विधि भन्न सुरक्षित छ। उपकरण प्रभावकारी लेजर चिकित्सा छ खण्डका चिह्न सामना गर्न मद्दत गर्छ। यो महिला लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले यी छाला blemishes सधैंभरि आफ्नो शरीर "विरूपित ~" ढुक्क छन्। यो प्रविधि Saggy छाला कस सुविधा, को "बुलडग" गाल हटाउनु, उठाने रूपमा कार्य। उपचार को एक पाठ्यक्रम पछि छाला थप चिल्लो, चिल्लो हराउँछ pigmentation हुन्छ, उनको स्वर लगायो। यो विधि संग, तपाईं पनि papillomas, warts, फ्लैट Moles, मुखासे संक्रमण को प्रभाव हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्।
सौम्य र घातक neoplasm (ट्यूमर)।
शरीर मा हर्मोन को ब्यालेन्स को endocrine प्रणाली र उल्लंघन को रोगहरु।
छाला रोग: एक्जिमा, seborrhea, dermatitis, psoriasis, र अन्य। यी रोगहरु को manifestations उजागर मान्छे तिनीहरूलाई हटाउनु ठूलो इच्छा छ कि स्पष्ट छ। तर यो प्रक्रिया गर्न मदत गर्दैन। Fraxel मात्र स्थिति exacerbate। दाना र खुजली, मात्र यो विधि द्वारा निर्मूल गरिने छैन, तर पनि जटिलताओं को खतरा देखिन्छ।
मानसिक रोग र असामान्यताहरु, मिर्गी सहित।
एक संक्रामक रोग को उपस्थिति।
छाला मा अल्सर।
पुनर्वास लागि सुझाव ग्राहकहरु
विशेषज्ञहरु हामी निरुत्साहित कि गर्नुपर्छ तपाईं प्रक्रिया पछि तुरुन्तै कुनै पनि सकारात्मक परिणाम हेर्न छैन भने चेतावनी। यो मूर्त प्रभाव एक महिना भन्दा कुनै पहिले हुनेछ। र अघि, तपाईं Fraxel भनिन्छ पीडादायी छाला कायाकल्प प्रविधी पछि प्रारम्भिक पुनर्वास प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। पुनःस्थापना, महिला को राय मा निम्नानुसार छ:
यदि सम्भव छ भने, पिउन छैन र रक्सी पिउन छैन।
नयाँ लागूऔषधको प्रयोग को संभावना निकाल्न यो अनुज्ञेय छ भने।
दुई हप्ता Scrubs र peels प्रयोग नगर्नुहोस्।
प्रभावित छाला एक विशेष मइस्चराइजिंग वा निको क्रीम को हेरविचार प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै लेजर को चिस्यान "vaporizes"। यस्तो प्रक्रिया पछि छाला धेरै सुख्खा र अस्थिर हुन्छ। यस्तो Payot देखि हाइड्रा 24 हल्का रूपमा उनको उपयुक्त माध्यम हेरचाह गर्न, Derm Acte एसपीएफ 30 Academie देखि (घाम बाट पनि रक्षा) Caudalie, Clarins देखि बहु-Hydratante, Aqualia देखि, Vinosource चिस्यान पुन क्रीम ड्राई छाला विची देखि थर्मल , लाभ देखि कुल चिस्यान। हाम्रो घरेलू राम्रो मइस्चराइजिंग प्रभाव संग कस्मेटिक उत्पादनहरु बीच, तर ब्रान्ड "ग्रीन फार्मेसी" एनजीओ "एल्फ," "साँझ स्वतन्त्रता" कारखाना बाट "" प्रदान गर्न छ।
सत्र पछि एक महिना भित्र लेजर को अनुहार र शरीर को उपचार क्षेत्र मा घाम जोगिन। स्पष्ट मौसममा बाहिर जानुअघि यूवी फिल्टर संग छाला क्रीम लागू गर्नुपर्छ।
को epidermis Hyaluronic एसिड इंजेक्शन वा उपचार उपकरण को तहहरूमा परिचय को विधि - तपाईं आफ्नो छाला सत्र Fraxel देखि पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने सैलून सेवा लिन भने, राम्रो मद्दत biorevitalization छ।
प्रक्रिया आशा के
कायाकल्प को एक सत्र पछि के जटिलताहरू उत्पन्न गर्न सक्छन् बुझ्न क्रममा, यो मान्छे पहिले नै सेवा परीक्षण गरेको छ समीक्षा उल्टाउन आवश्यक छ। हाम्रो समय मा चिकित्सा को विकास पूर्ण स्विंग छ। तर, दुर्भाग्यवश, उपस्थिति मौलिक सुधार प्रभावकारी पीडारहित विधि अझै आविष्कार भएको छैन। त्यसैले हाम्रो मामला मा, हामी यस कायाकल्प प्रविधि अक्सर महिलाहरु शारीरिक पीडा धेरै दिन्छ स्वीकार छ। तपाईं तयार गर्न, आवश्यक पहिलो कुरा महिलाहरु को एक समीक्षा अनुसार प्रक्रिया, लगातार दुखाइ को यो पारदर्शी निर्णय भएको। र यो सबै प्रक्रिया कार्य कि लेजर को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। बीम मजबूत भएको पुनर्वास पछि सत्र समयमा दुखाइ महसुस हुनेछ, र अब, यो उपकरण गहिरो penetrates। पूर्व उपचार गर्न बिरामीको छाला analgesic lidocaine को एक विशेष संरचना संग lubricated छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद प्रक्रिया अझै पनि महिला लागि अप्रिय क्षणहरू धेरै दिन्छ। तिनीहरूले समीक्षा मा रिपोर्ट, यो सुसज्जित विशेष क्रायोजेनिक सिस्टम संग लेजर "Fraxel" को दुखाइ नरम मद्दत गर्छ। यो मामला, बिरामीको छाला उड्ने चिसो हावा प्रवाह संग सत्र समयमा मा (-6 ° C)। यो दुखाइ कम गर्छ। अर्को महिला कायाकल्प को बिदा समय मान्छे धेरै दिनको लागि घर छोड्न सक्नुहुन्छ जब स्थगित गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो। वास्तवमा, उपचार पछि रिकभरी अवधि सुरु गर्नुहोस्। यो समयमा एक व्यक्ति सबै भन्दा राम्रो तरिकामा खोज्दैन: bruising, गंभीर राता, सुनिंनु छाला र peeling को darkening। केही दिन पछि यो सबै जान्छ। त्यसपछि तपाईं सार्वजनिक देखा पर्न अनुहार टन र साधन धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
यो Fraxel भनिने प्रविधी को मद्दतले rejuvenate गर्न लागत कति पत्ता लगाउन समय। एक सत्रको लागि मूल्य फरक सैलून मा फरक हुन सक्छ। तर सेवा औसत लागत निम्नानुसार छ:
को परेलिहरु सहित सम्पूर्ण अनुहार, - 18 000 rubles;
; 8000 rubles - निधारमा र अस्थायी क्षेत्र ( "काग खुट्टा" हटाउन)
मात्र सधैंभरि - 8000 rubles;
गालामा (हटाउन मुखासे पछि scars) - 10 000 rubles;
हात (हात) - 10 000 rubles;
perioral क्षेत्र (को nasolabial Folds हटाउन) - 6500 rubles;
अनुहार र घाँटी सँगै - 24 000 rubles;
scars (1 cm²) हटाउन - 1000 rubles;
stretching हटाउनु (1 cm²) - 500 rubles।
सकारात्मक उपभोक्ता टिप्पणी
धेरै महिलाहरु तिनीहरूले शायद यो प्रक्रिया गर्न dared कि स्वीकार। आज लेजर चिकित्सा तेजी विकास यद्यपि, दुर्भाग्यवश, धेरै छैन पीडारहित विधि अब अवस्थित छ। सौन्दर्य बलिदान आवश्यक छ। यो कथन सहमत संग, धेरै महिलाहरु। तिनीहरूले पनि अधिक सुन्दर बन्न कुनै पनि पीठो सहन गर्न इच्छुक छन्। साथै, परिणाम यो लायक छ। सौंदर्य सैलून को ग्राहकहरु को आश्वासन, यो प्रविधि साँच्चै तपाईं नाटकीय छोटो समयमा rejuvenate गर्न अनुमति दिन्छ। उपचार पाठ्यक्रम पछि एक महिना, र "osypletsya" पुरानो लेजर जल छाला "छील" पछि भित्र, आफ्नो rejuvenated र ताजा अनुहार को ऐनामा देख्न सकिन्छ। के विशेष राम्रो छ, यो एक अस्थायी प्रभाव छ। यस्तो परिवर्तन यसको possessor थप एक वर्ष भन्दा खुसी हुनेछ। खण्डका चिह्न बारे चिन्तित हुनुहुन्छ जो महिलाहरु गर्भावस्था र प्रसब पछि देखा लागि, यो स्थायी रूपमा तिनीहरूलाई उन्मुक्ति पाउनु साँच्चै तरिका हो। र, को पाठ्यक्रम, जसको अनुहार मुखासे scars वा scars को निशान द्वारा disfigured छ मान्छे, लागि - यो मुक्तिको, आफ्नो "डरलाग्दो सपना" बारे भूल गर्न अनुमति साधनहरुलाई।
वैकल्पिक दृष्टिकोण महिलाहरु
त्यहाँ Fraxel रूपमा कायाकल्प को यो विधि धेरै विरोधीहरूले छन्। मूल्य - यो उपभोक्ताहरु अनुरूप गर्दैन पहिलो हो। यो प्रक्रिया को लागत साँच्चै उच्च छ भन्ने मान्यता गर्नुपर्छ, र सेवा सबैले किन्न सक्छन् सक्छ। यस्तो कायाकल्प बाटोमा महिला रोक्छ कि दोस्रो कुरा - सत्र र रिकभरी अवधि दुवै दर्दनाक छ। सदस्य "डरलाग्दो" समयमा र प्रक्रिया पछि आफ्नो भावना बारेमा कथाहरू बताउनुहोस्। मान्छे एक सत्र समयमा असह्य दुखाइ, जलेको छाला को गन्ध अनुभव लेख्ने। Cosmetologists उपचार पछि2घण्टा पछि यो पीडा अझ तीव्र रूपमा, एक painkiller पिउन अर्थमा बनाउँछ भन्ने चेतावनी। महिला आफ्नो भावना एक दिन मा उपचार पछि, पानी उम्लिरहेको संग scalded भने, छाला क्रिमसन छ, आफ्नो अनुहार सुन्निएको, आँखा यो असम्भव देखिन्छ यो फारम मा सडक मा देख्न सक्नुहुन्छ साझेदारी गर्नुहोस्। अर्को दिन पछि, सबै, itchy itchy र crumble गर्न थाल्छ। र केवल 8 दिन पछि तपाईं सुरक्षित ऐनामा आफूलाई हेर्न सक्छन्। रिकभरी अवधि लागि यस्तो लामो समय, हरेक महिला किन्न सक्छन्। Fraxel रूपमा कायाकल्प को यो विधि को शून्यता बारेमा केही नकारात्मक टिप्पणी पनि छन्। "यो के हो एक महिना मा तपाईं प्रक्रिया अघि जस्तै परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ कि?" - केही उपभोक्ताहरु outraged। यो विधि कम शक्ति लेजर प्रयोग भएको थियो किनभने झुर्रियाँ हटाउन मदत गर्दैन सम्भव छ। दुखाइ गर्दा विरामीहरु एक सानो राता लगभग छ अनुभव, तर प्रभाव लगभग शून्य हुन सक्छ।
हामी अनुहार को कायाकल्प र शरीर Fraxel भनिन्छ नयाँ अत्यधिक प्रभावकारी विधि समीक्षा। के यो अब धेरै चिनिएको छ।
सिलिकन ओठ - एक व्यक्ति वा एक स्वास्थ्य जोखिम लागि सजावट?
उनीहरूको तुलना र समीक्षाहरु "एन्जिल्स" को "टेस्फेपामा"
यो अचम्मको चिनियाँ रेशम चिकन
जो सेना लिने छैन संग रोगहरु
बच्चाहरु को लागि कुर्सी rocking: चयन गर्न के?
Boruts ARTUR: क्यारियर प्रसिद्ध पोलिस गोल रक्षक
कुकुर खाना "सम्राट्लाई": संरचना, समीक्षा। कुकुर लागि सुपर प्रिमियम खुवाउन